LibreOffice 6.0.4 misy izao miaraka amina fanamboarana mihoatra ny 88 | Avy amin'ny Linux
Ny Document Foundation dia nanambara fa ny fanavaozana ny fikojakojana vaovao ho an'ny LibreOffice 6.0 Azo alaina amin'ny fametrahana sy fametrahana azy izao.
Ny LibreOffice 6.0.4 dia tonga dimy herinandro monja taorian'ny fanavaozana ny fikojakojana teo aloha ary mitondra a totalin'ny fanamboarana bibikely 88 izay nisy fiatraikany tamin'ny singa isan-karazany tao amin'ny efitrano fiasan'ny birao, toa ny mpanoratra, Calc, Impress, Draw, Math ary ny hafa.
Na dia ity aza ny fanavaozana fahefatra fikarakarana ho an'ny LibreOffice 6.0, Ny Document Foundation dia mbola manolotra ity kinova ity ho an'ireo mpampiasa sy manam-pahaizana taloha amin'ny rindrambaiko izay te-hanandrana ireo fiasa vaovao rehetra amin'ity kinova ity, fa tsy ho an'ireo mpampiasa vaovao mitady fitoniana.
Sintomy ny LibreOffice 6.0.4 izao
Raha mampiasa LibreOffice 6.0 ianao dia zava-dehibe ny hametahanao ity fanavaozana vaovao ity satria hamaha bug maro be amin'ny programa rehetra. Azonao atao ny misintona ny fanavaozana amin'ny fomba maro, amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialy na amin'ny fikaroham-baovao amin'ny alàlan'ny programa. Misy ny fisie binary ho an'ny kinova, 32 sy 64 bit, vonona ho an'ireo mpankafy te-hamoaka ny endriny manokana.
Amin'ny tenin'ny The Document Foundation, raha ny tadiavinao dia ny fametrahana LibreOffice amin'ny endriny marin-toerana indrindra, ny safidinao tsara indrindra dia ny misintona LibreOffice 5.4.6 fa tsy ny kinova ankehitriny izay hanohy handray fanavaozana fikojakojana amin'ny volana ho avy.
Raha tsapanao fa manandrana ny vaovao, na inona na inona fitoniana, dia azonao atao ny miandry ny mametraka LibreOffice 6.1 izay ho tonga miaraka amin'ny kinova alpha voalohany ao anatin'ny tapa-bolana, manana beta amin'ny Mey, beta faharoa amin'ny volana Jona ary kinova farany amin'ny volana Aogositra .
Tadidio fa raha manana fanontaniana ianao dia afaka miditra amin'ilay fantsona # libreoffice-qa amin'ny mpanjifa IRC na mivantana amin'ny fantsona Telegram izay hitanao amin'ny pejy ofisialy, eo no ahitanao ny fampahalalana rehetra momba ireo lesoka izay ahitsin'ny LibreOffice 6.0.4
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » LibreOffice 6.0.4 misy izao miaraka amina fanamboarana mihoatra ny 88